Waa kuma ninkan Raysal wasaaraha noqonaya 143-ka maalmood ee keliya ? - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Waa kuma ninkan Raysal wasaaraha noqonaya 143-ka maalmood ee keliya ?
Waa kuma ninkan Raysal wasaaraha noqonaya 143-ka maalmood ee keliya ?
Madaxweyne Farmaajo, ayaa xalay saqdhexe digreeto ku magcaabay Maxamed Xuseen Rooble, oo ah nin aan weligi hore ugu soo muuqan siyaasadda.
Maxamed, ayaa aqbalay in raysal wasaare loo magcaabo 143 –ka maalmood ee ka harsan muddo xileedka madaxweyne Farmaajo iyada oo ay jiraan rag badan oo diiday in ay qaataan xilkan xilliga koobani ka harsanyahay.
Qoraalka lagu magcaabay raysal wasaarahan cusub, ayaa lagu yiri.
“Madaxweyne Farmaajo ay amray in uu deg-deg ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka u horseedda in ay ka dhaqan geilso doorasho, dadaal muuqdana gelisa sidii loo xoojin lahaa guulaha laga gaaray amniga, dib u dhiska Ciidamada Qalabka sida, horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha, baahinta adeegyada aas-aasiga ah, kamiro dhalinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo musuqmaasuqa.”
Maxamed Xuseen Rooble, waa 57 sano jir ah injineer ku dhashay magaalada Hobyo, bishii Oktoobar 1963, ahna aabe dhalay shan carruur ah.
Waxa uu waxbarshadiisa hoose dhexe ku qaatay magaalada Muqdisho halkaas oo uu maada Injineerinka ka galay Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed sanadku markuu ahaa 1990.
Waxaa uu kamidyahay qaxoontiga Soomaaliyeed dagaalladii sokeeye ay uqixiyeen debadda, waxaana uu hadda ku noolyahay waddanka Sweden.
Sikastaba ha ahaatee ninkan, ayaa kusoo beegmay wakhti uu waddanka Soomaaliya kujiro xaalad siyaasadeed oo kala guur ah. Waxaana laga sugayaa in uu soo dhiso xukuumaddii dalka gaarsiin la hayd doorashada waa haddii ay baarlamanku meelmariyaan isaga qudhiisa.
Dagaal ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Dhuusa-mareeb
RW Rooble oo amray fulinta heshiiskii siyaasadeed ee DF iyo D.Goboleedyada